MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-11-17
at 11/22/2013 11:36:00 PM No comments:
at 11/22/2013 11:35:00 PM No comments:
ကချင်ပြည် နယ်တောင်ပိုင်း ဗန်းမော် ခရိုင် မန်စီမြို့နယ်ရှိ ကချင် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (KIO) တပ်မဟာ (၃) တပ်ရင်း (၁၂) ဒေသတွင် အစိုးရတပ်များအား ချောင်းပစ်ခြင်း ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခြင်းမပြုရန် KIO ဗဟိုဌာနချုပ်မှ ညွှန်ကြားထားသော်လည်း တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်။
at 11/22/2013 11:33:00 PM No comments:
at 11/22/2013 04:09:00 PM No comments:
လူကုန်ကူးမှု ကြိုတင်ကာကွယ် တားဆီးရေး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ မြစ်ကြီးနားတွင်ပြုလုပ်
လူကုန်ကူး မှုပြဿနာ များ နှစ်စဉ် ရင်ဆိုင်နေရ သည့် ကချင်ပြည် မြစ်ကြီးနားမြို့ တွင် ပြည်နယ် လူကုန်ကူးမှု တားဆီး ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့မှကြီးမှူး ၍ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးရေး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကို တပ်ကုန်း ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွင် ယနေ့ ကျင်း ပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် လူကုန်ကူးမှု ပြစ်မှုများသည် နှစ်စဉ် ၁၅ မှုမှ ၃၀ မှုအထိ် ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ထိုပြစ်မှုများကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပညာပေးဟောပြောပွဲတွင် အမှတ် (၁) ရဲစခန်းမှူး ဦးမြင့်ကြူက ပို့ချခဲ့သည်။
at 11/22/2013 01:14:00 PM No comments:
at 11/22/2013 10:11:00 AM No comments:
at 11/22/2013 09:54:00 AM No comments:
အစိုးရတပ်များအား ချောင်းပစ်ခြင်း၊ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုရန် ကေအိုင်အေတပ်များကို ကေအိုင်အို ဗဟိုက ညွှန်ကြားထားသော်လည်း နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် ညနေပိုင်းတွင် မန်စီမြို့နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲပြန်လည် ဖြစ်ပွား
အစိုးရတပ်များအား ချောင်းပစ်ခြင်း၊ ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုရန် ကေအိုင်အေ တပ်များကို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို) ဗဟိုက ညွှန်ကြား ထားသော်လည်း နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ မန်စီမြို့နယ် အတွင်းရှိ နန့်လင်းပါ ကျေးရွာအနီးတွင် တိုက်ပွဲပြန်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
at 11/22/2013 08:51:00 AM 1 comment:
at 11/22/2013 08:36:00 AM No comments:
at 11/22/2013 08:35:00 AM No comments:
at 11/22/2013 08:34:00 AM No comments:
at 11/21/2013 01:07:00 PM No comments:
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းမှာပဲ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ထဲက မန်စီ ဒေသ တဝိုက်မှာ စစ်တပ် အင်အားတွေ တိုးတက် ချထားနေ ပါတယ်။
အဲဒီက နောက်ဆုံး အခြေအနေ တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကေအိုင်အို ပြောခွင့်ရသူ ဦးလနန်းကို ဆက်သွယ် မေးကြည့်တော့ အဲဒီ ဒေသတွေမှာ ကေအိုင်အေ တပ်တွေ နဂို ထဲက ရှိနေပြီးသားလို့ ပြောပါတယ်။
at 11/21/2013 10:02:00 AM No comments:
at 11/21/2013 08:34:00 AM No comments:
at 11/21/2013 08:31:00 AM No comments:
at 11/21/2013 08:29:00 AM No comments:
at 11/20/2013 04:18:00 PM No comments:
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအမြန်သွားရန် အာမခံချက်လိုကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်ပြောဆို
အစိုး ရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့များ တစ်နိုင်ငံ လုံး အတိုင်း အတာ အပစ်ရပ် စာချုပ် ချုပ်ဆို ပြီးနောက် နိုင်ငံရေးဆွေး နွေး ပွဲ အမြန်ပြု လုပ် သွားရန် အာမခံချက် လိုချင်ကြောင်း ယမန်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ Business Alliacee Hotel တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(ကေအိုင်အေ) ၏ ဒုတိယ စစ်ဦးစီး ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် က ပြောကြား လိုက်သည်။
“ကျနော်တို့ဘက်က ဖြစ်စေချင်တာကတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးနောက်မှာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို အမြန် သွားနိုင်ဖို့ အာမခံချက်လိုချင်ပါတယ်။ အာမခံချက် ဘယ်လောက်ခိုင်မာမလဲ ဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့ဘက်က မူကြမ်းကို ရေး ဆွဲပြီးတော့ သူတို့နဲ့ ပြန်ညှိတဲ့အချိန်မှပဲ သိရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်က ပြောကြားခဲ့သည်။
at 11/20/2013 03:37:00 PM No comments:
at 11/20/2013 10:33:00 AM No comments:
at 11/20/2013 09:11:00 AM No comments:
at 11/20/2013 09:09:00 AM No comments:
at 11/20/2013 09:01:00 AM No comments:
at 11/20/2013 08:58:00 AM No comments:
at 11/20/2013 08:57:00 AM No comments:
at 11/20/2013 08:53:00 AM No comments:
အစိုးရတပ်နှင့် အပြန်အလှန်မပစ်ရန် ကေအိုင်အို ညွှန်ကြားချက်ထုတ်
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် မန်စီမြို့နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့ ယခုတစ်ပတ်အတွင်း တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးနောက် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်မှစတင်ကာ ပစ်ခတ်ခြင်းမပြုရန် KIO က ညွှန်ကြားလိုက်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ဘက်က မပစ်ဖို့ အထက်က ညွှန်ကြားထားလို့ ကျွန်တော်တို့လည်း မပစ်ဘဲရပ်ထားတယ်။ သူတို့(အစိုးရတပ်)ကတော့ ပစ်ခတ်တာရှိသေးတယ်၊ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကို လမ်းတွေ့ရင်ပစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့က မပစ်ဘူး”ဟု KIO တပ်ရင်း ၁၂ တပ်မမှူး ဗိုလ်မှူးဂျွန်းအောင်က ပြောသည်။
at 11/20/2013 08:47:00 AM No comments:
at 11/19/2013 08:11:00 PM No comments:
at 11/19/2013 08:40:00 AM No comments:
at 11/18/2013 07:17:00 PM No comments:
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ UNFC သည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ၊ ပြည် ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေး ပါတီ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ပါတီ ကဲ့သို့သော ပြည်တွင်း အဓိက နိုင်ငံ ရေးပါတီ များနှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရန် လာမည့် နိုဝင်ဘာလ (၂၀)ရက်နေ့တွင် အရေး ပေါ် အစည်းအဝေးတရပ် ခေါ်ယူထားကြောင်း အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး (၂) ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ဆိုပါ သည်။
“အားလုံး (၁၂) ပါတီ ပါခင်ဗျ၊ တစ်ရက်တည်း ပါပဲ မနက် (၉) နာရီကနေ (၁၂) နာရီ အထိ တွေ့ကြမယ်၊ တွေ့ချိန်က (၃) နာရီ လောက်ပဲ အချိန် ရမယ်ဆိုတော့ အဓိကကျတဲ့ အကြောင်း အရာအဖြစ် ဘာတွေ ဆွေးနွေး ကြမှာလဲ ဆိုတာ ညှိနှိုင်း နိုင်ဖို့ အတွက် အစည်အဝေး ခေါ်ထား တာပါ” ဟု ဆိုပါသည်။
at 11/18/2013 07:14:00 PM No comments:
at 11/18/2013 07:13:00 PM No comments:
at 11/18/2013 04:13:00 PM No comments:
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၏ လိုင်ဇာဆွေးနွေးပွဲတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအဖွဲ့ (NCCT) ၏ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ရန် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (ကေအိုင်အေ) ၏ ဒုတိယစစ် ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်သည် မြစ်ကြီးနား၊ ရန်ကုန်မြို့များမှတစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့(PCG) မှ ဦးလမိုင်ဂွန်ဂျာ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်သည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရန်အတွက် မြစ်ကြီးနားမှ ရန်ကုန်မြို့သို့ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက် ညပိုင်းတွင် လာရောက်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
at 11/18/2013 08:33:00 AM No comments:
at 11/17/2013 09:41:00 PM No comments:
မန်စီတွင် တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်၊ ဒုက္ခသည် နှစ်ထောင်ကျော် ထပ်မံတိုး
ကချင်ပြည်နယ်၊ မန်စီမြို့အနီး၊ နမ့်လင်းပါ ကျေးရွာတွင် အစိုးရတပ်မတော်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA)တို့တိုက်ပွဲ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကျေးရွာများမှ မန်ဝိုင်းကြီးဘက်သို့ ထွက်ပြေးလာသူ ရွာဒေသခံများ နှစ်ထောင်ကျော်ရှိနေသည်ဟု ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင် စားနပ်ရိက္ခာများ ကူညီပေးနေသည့် ကတ်သလစ် အသင်းတော်မှ တာဝန်ရှိသူ ကိုနော်ဒင့်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
တိုက်ပွဲမှာ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ရက် မနက် ၇နာရီတွင် ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒေသခံ ရွာသူရွာသားများမှာ တပ်မတော်ဘက်မှ စစ်ကြောင်းများ ၀င်လာစဉ် နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်တွင် မန်ဝိုင်းကြီးဘက်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကိုနော်ဒင့်က ပြောသည်။
"မနက် ၇ နာရီက စပစ်လိုက်တာ နေ့လည် ၁နာရီကျော်လောက်မှ တိုက်ပွဲက အသံတွေရပ်သွားတယ်"ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
at 11/17/2013 09:39:00 PM No comments:
နမ်လင်းပါကျေးရွာတွင် ယနေ့မနက် နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီအချိန်ခန့် မှ စတင်ပြီး အစိုးရနှင့် ကေအိုင်အို တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကာ ဒေသခံများသည် ရွာပြင်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပြီး ယခုအချိန် နမ်လင်းပါကျေးရွာရှိ အိမ်များ မီးလောင်ကျွမ်းလျှက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
နမ်းလင်းပါကျေးရွာတွင် ၁၃၀၀ ခန့်ရှိသည့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းနှင့် ကျောင်သား ၈၀၀ ခန့်ရှိသည့် ကျောင်းဘော်ဒါဆောင်ရှိသည့် ကျေးရွာဖြစ်သည်။
at 11/17/2013 07:27:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinpraw Ginwang, KIA Dap Ba (3) up hkang ginra rai nga ai Namlim Pa Mare hpe myen hpyen ni kawn November (16) ya shan hkying (4:00 PM) ram hta shan madu kau sai lam shiga na chye lu ai. Myen hpyen ni gaw KIO AsuyaaGaw Sharawt, Tsi Rung, Hpyen Yen Daban ni yawng hpe shang shalau kau sai lam hpe mung na chye lu ai.
at 11/17/2013 07:16:00 PM No comments:
at 11/17/2013 07:15:00 PM No comments:
at 11/17/2013 03:53:00 PM No comments:
ယနေ့နံနက် ၇ နာရီမှ နမ့်လင်းပါကျေးရွာတွင် အကြီးအကျယ် ၀င်ရောက် ပစ်ခတ်နေသည်။ ကျေးရွာသားများနှင့် IDP များ အားလုံး ၂၃၀၀ ကျော် ရွာပြင်သို့ ထွက်ပြေးနေသည်။ ရွာတွင်း ထိခိုက်မှု ပိတ်မိမှု သေဆုံးမှု မသိရသေး။ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ညနေ ၄ နာရီ ၃၀ မိနစ် ခန့်တွင် နမ့်လင်းပါကျေးရွာသို့ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ပစ်ခတ် ၀င်ရောက် သိမ်းပိုက်သဖြင့် မူလ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၁၀၀၀ ကျော်၊ ဘော်ဒါဆောင်နေ ကျောင်းသား ၃၀၀ ကျော်၊ ကောင်လွေ (Gawng Run) နှင့် ဆဂနမ်ခွမ် (Saga Nam Hkum) ကျေးရွာများမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူများနှင့် နမ့်လင်းပါ ရွာခံ များ စုစုပေါင်း ၂၃၀၀ ကျော်ခန့် တညလုံး ကစဉ့် ကလျား ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရပါသည်။
at 11/17/2013 12:39:00 PM 1 comment: